Buy Men Leather Shoulder Bags (45,000Ks) in ကျောက်တံတား on ipivi.com
#ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ထားသော #Leather bag များအား အရေအသွေး အထူးအာမခံ ဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါတယ်....
#တစ်ခု =၄,၅၀၀၀ Ks
#Mens #leather shoulder bag.
Code :2316 #
?Colour : Brown & Black
?Size : 45cm*42cm
?Price : 45,000 MMK
Logo : Three Box
??Quality : High Quality
???️Delivery Time: 15 Days
?Eco-friendly material, good quality
?Good flexibility and nice touch feeling leather
?Fashion design and good-looking
?Two Different color are available
??ရန်ကုန်ဖြစ်ပါက မြို့နယ် အလိုက်ပို့ခ ပေးရပါမယ် အိမ်ရောက်မှ ငွေချေပါ။ # ရန်ကုန်မြို့တွင်းပို့ခ ၃,၀၀၀ ကျပ်ပါ။
??နယ်ဖြစ်ပါက ငွေကြိုလွဲပေးရပါတယ်.....၂၄ နာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်သို့ အရောက်ပို့ပေးပါတယ်...
#ကားဂိတ်ပို့ခ ၃၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါမယ်......
#တန်ဆာခ ကို ဝယ်သူ လူကြီးမင်းတို့ ဘက်ကသာ ပေးဆောင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် ??
Facebook Chat box တွင်
#ပစ္စည်း ပို့ပေးရမယ့်နေရာစသည်တို့ ပေးပို့ပြီးမှာယူနိုင်ပါတယ်...
#Alzar #Myanmar #Fashion #Bag #Tshirt
အမည်: Men Leather Shoulder Bags